Ukukhulelwa - kuyisimangaliso sangempela. Futhi ukuzalwa komntwana - omningi nenjabulo abazali. Phambili alindele imisebenzi yasekhaya emnandi ephathelene ne-ngokukhetha igama elifanele, ukuthenga izingubo, cribs, strollers, kanye nezinye izinto ezibalulekile. omama Ikusasa ngiyazi ukuthi emva kwesikhathi esithile, kumele baye kwi sokubeletha. Kusukela lokho inyanga sizokwazi ukwenza kanjalo, setha wezifo zabesifazane.
Kodwa okokuqala kowesifazane umsebenzi wemfanelo ukusindisa ingane siyimiqemane nokuthula kwangaphakathi, ukwenza ingane ngaphandle izinkinga nezifo. izinguquko unomphela futhi ezinkulu ngunina wabo bonke idluliselwe ngendlela ehlukile. Othile lula bahambe amabanga amade, kanti ezinye sonke isikhathi sleepy nokukhathala aqoqana ngokushesha. Emsebenzini wonke nzima ukuthola umsebenzi, ngokuvamile bafuna ukuhamba emoyeni opholile. Abesifazane ngubani abelethe okokuqala musa kakade, ne izinyanga ezinye sokubeletha. Intsha nabangenakho okuhlangenwe nakho njengoba nje siqale ukucabanga futhi ngenkuthalo nesithakazelo kule ndaba.
Izindaba zomthetho lapho ushiya ku sokubeletha
Okuningi ngokunembile, kanye ngenyanga iye sokubeletha, sibonga ukucwaninga kwezokwelapha zanamuhla zingatholakala emva ultrasound Luhlolo wokuqala. Udokotela uyobheka futhi ukukhomba usuku eseduze lokuzalwa nge kunakho konke ayengabenzela ukunemba. lwesikhashana usuku Ukuhamba ku sokubeletha izonqunywa ngesisekelo lesi.
Ngokwe komthetho wezabasebenzi, lona wesifazane obizwa ingane, kungase kuthathe ngeholide zomthetho, kusukela ngesonto 30 okukhulelwa. ukubala Simple kuyoyisiza ukuzulazula ukubala usuku oyifunayo. Umama elijabulisayo ezimithi amaphahla noma esikhathini esizayo kufanele wazi ukuthi ungaya kancane ngaphambili kulesi simemezelo. Okuningi ngokunembile, kanye ngesonto 28.
Zonke izinhlangano emnyangweni izisebenzi ukuthi yini ngenyanga ukuya sokubeletha, ngakho ukutshela ngokwanele ngokukhulelwa kanye usuku lokuzalwa. Okulandelayo, udinga ukubhala isitatimende, owawuthi umqashi kuyodingeka bakhokhe lonke inani lemali posited womama esizayo izinsuku 140. Lapho wena ulindeleni izingane eziningana, izinguquko ukubala. Ngaphambi kokuzalwa abakhulelwe kufanele izinsuku 86 lokuphumula, futhi ngemva - 110. Kusobala ukuthi ukuzalwa komntwana akulula ngaso sonke isikhathi. Ngakho, ngokwesibonelo, ukukhokhela kwesigaba cesarean nakakhulu izinsuku 16 emva kokuzalwa.
Kwezinye izinhlangano, lapho "amhlophe" Umholo incane, hamba ikhefu ngesikhathi eside esimisiwe awanasisekelo, futhi kungcono ukuze uthole okwengeziwe. Ukubala kusekelwe usuku sokuhamba titawudvwetjwa izinsuku 140, futhi esimweni ezimithi amaphahla noma - 186 noma 196, ngokulandelana. Izinkokhelo ayihlelwa inhlangano futhi kusukela kulesi sikhwama umshuwalense wezempilo. Ngakho-ke, ukuphathwa kakhulu akanandaba ngasiphi womama ngenyanga ushiye omama esizayo, naphezu kwesimo esinzima wezimali ka kulesi sikhathi samanje.
Yeka ukuthi kuyinto Ukuhamba ku sokubeletha
Kulo nyaka, leli nani ezinkulu e izinzuzo ukuthola kuyoba ruble 44.975. Kusukela ngo-2010, ukwanda zaba ruble 9729. Lokhu kubalwa kwenziwa ngo-2011 I-algorithm ilula:
1. Umbiko inkokhelo isilinganiso (Yiqiniso, esemthethweni) e 24 izinyanga ikhalenda.
2. Isibalo kwaphumela lihlukaniswe by 730.
3. isiphetho siyoba umphumela, iphindwe 30,4.
Kukhona futhi ukulinganiselwa. Inani eliphelele inkokhelo singadluli 568000 (idatha ye-2013).
Thola izinzuzo ezingalethwa bonke abasebenzi asebenzayo, elalihlotshiswe ngaphansi inkontileka omsebenzi. Uma kwenzeka ukuba owesifazane isikhundla babadubula ngenyanga ngaphambi kokushiya e iholide ejwayelekile, ilungelo bazuze wawusindisa. Abakhulelwe, owaba abangasebenzi ngenxa ekuvalweni kwenhlangano, futhi unalo lonke ilungelo ilungiselelo yomthetho imali. Kodwa kungenzeka, uma ngemva kokuqedwa umsebenzi wenkampani akuyona izinyanga ezingaphezu kuka-12.
Ngokuvamile omama ku womama shiya nengane yokuqala, okuyinto eminyakeni engaphansi kwengu-1.5, owesibili ozalwa. Futhi kulokhu akaphiki izinzuzo. Lokhu kuphakamisa ukhetho ukuthola izinkokhelo ku sokubeletha noma izinzuzo ingane endala.
Kanjani ukulala ngesikhathi sokukhulelwa
Imodeli yokufaneleka Suzanne Toldi: ukudla nokuzivocavoca
Soviet Pin - I-ISIFISO
Koshchey isudi ngezandla zakhe - izincomo womshini
Nezimfumbe ngezinyoni: ezifuywayo nezasendle, ezifudukayo ubusika
Microcomputer - a microcomputer-Windows ...
Ibhali iphalishi - ukudla okunempilo etafuleni